Taliska Guud Ee Ciidanka Booliska Somaliland Oo Ka Hadlay Laba Dumar Ah Oo Ku Dhaawacmay Rasaas – WARSOOR
Taliska Guud Ee Ciidanka Booliska Somaliland Oo Ka Hadlay Laba Dumar Ah Oo Ku Dhaawacmay Rasaas
Hargeysa – (warsoor) – Taliska guud ee ciidanka booliska somaliland ayaa ka hadlay laba dumar ah oo ku dhaawacmay rasaas ay ciidanka booliska somaliland ku kala dareerinayeen dagaal safayn ah oo ku dhex maraayay laba xaafadood ee wada dagan xaafada xero awr ee magaalada hargeysa.
Sidaasi waxa sheegay af hayeenka ciidanka booliska somaliland gaashaanle sare faysal xiis oo khadka taleefanka ugu waramay wariye mahad hassan geelle oo ka tirsan shabakada hadhwanaagnews.
Faysal Xiis oo ka hadlaaya sida ay wax u shaceen ayaa waxa uu yidhi “Xafada xero aw waxa ka dhacay dagaal safayn ah ka dibna boolisku nabad galyo ahaan ayaay ugu gurmadeen booliskii markii ay is yidhadeen kala dhex gala dadkii safaynka isku laynaayay ayaa waxa lagala hor yimi dhagxaan oo qaar ka mida ciidanka waa la dhaawacay”.
Sido kale af hayeenka ciidanka booliska somaliland gaashaale sare faysal xiis oo hadlkiisa sii wata waxa uu noo xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen laba dumar ah waxaana uu yidhi “Haa waa run laba dumara ayaa xabadi ku dhacay waanu ka xunahay dhacdadaasi dhacday kiiskaasna waa la baadhayaa gacantaana lugu hayaa”, sidaasi waxaa yidhi Faysal Xiis.
Sido Kale Taliyaha Guud Ee Ciidnka Booliska Somaliland Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa dhankiisa sheegay in ay ka xunyihiin dhawacaas sida la filaanka ah u gaadhay dumarkaasi waxaana uu yidhi “ sida uu ku sheegay af hayeenka ciidanka booliska somalilad Gaashaanle sare Faysal xiis Kiiskaa ka ciidan ahaa waanu baadhaynaa ciidankuna si kama ah ayaa xabadu uga dhacday iyagoo ku guda jira sidii ay u kala furdaamin lahayeen dagaalkaasi safaynka ee Ee Ka Dhacay Xaafadaasi Xero Awr.
Wariye Geele Aar
Sababtii Ambaasadar Safiinna loogu Xidhay Kenya oo la Ogaaday
Gudoomiyaha Xisbiga Waddani Laanta Holland Oo Si Kulul U Cambaareyey Afduubka Lagula Kacay Amp.Axmed Safiina